Usoro ojiji - BancaNEO
Bọchị ịmalite: 1st July 2021
Mmadụ bịa ka www.bancaneo.org ("Saịtị" ma ọ bụ "Webụsaịtị"). MY NEO GROUP TRUST sitere na Italy nwe ma na-arụkwa webụsaịtị a.
N’ime saịt a, okwu a bu “anyi”, “anyi”, “ikpo okwu”, “Bancaneo" na "anyị" na-ezo aka na MY NEO GROUP TRUST. Anyị na-enye webụsaịtị a, gụnyere ozi, ngwaọrụ na ọrụ niile dị na saịtị a nye gị, onye ọrụ, dabere na nnabata nke usoro, ọnọdụ, amụma na ọkwa niile ekwuputara ebe a.
Site na ịga na saịtị anyị na / ma ọ bụ mgbe ị mepee akaụntụ anyị, ị (“Onye ọrụ” ma ọ bụ “Ahịa”) itinye aka na “Ọrụ” anyị ma kwenye na ị ga-agbaso usoro na usoro / usoro eji eme ihe (“Okwu”) , gụnyere usoro na ọnọdụ ndị ọzọ agbakwunyere ebe a na / ma ọ bụ dị site na hyperlink.
Usoro na Ọnọdụ ndị a metụtara ndị ọrụ niile nke saịtị ahụ, gụnyere ndị na-enweghị mmachi ndị na-eme nchọgharị, ndị ọrụ, ndị ahịa na / ma ọ bụ ndị na-eweta ọdịnaya.
BIKO G TỌ B T AKWMSKWỌ ND AND NA-EKWU NDERS NA-ECHICHE KWESARR B KWES USR US N'USLỌR US USLỌ. Ọ B IFR YOU na DO KWES WITHGH WITH Usoro ndị a, iwu anyị, ma ọ bụ iwu ọ bụla ọzọ, anyị ekwesịghị iji ọrụ ndị a..
Bancaneo - Ozi Izugbe
Ihe. Bancaneo -ONYE APP, Ihe niile EGO - Mepee akaụntụ na nkeji oge site na ekwentị gị, wee mee ka ego gị gaa n'ihu. Ohia mmiri ka ị na-azụ ahịa Anyị na ndị ọrụ ibe anyị na-azụgharị n'okirikiri na-arụ ọrụ gburugburu ụwa .. Iji chọpụta ozi ndị ọzọ gbasara ihe anyị na-eme, biko rụtụrụ aka na weebụsaịtị anyị.
Services. Anyị na-enye ọrụ ndị a:
akaụntụ nkeonwe na azụmaahịa;
na-abata ma na-enyefe na ego dị iche iche, gụnyere ịkwụ ụgwọ SEPA na SWIFT;
Ọrụ eWallet, gụnyere itinye eWallets site na mpụga ndị ọzọ;
ịkwụ ụgwọ na kaadị;
wepụ ego site na igwe ndọrọ ego.
Ezi uche. Anyị debere ikike ịgbakwunye / kwụsị ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ọ bụla n'oge ọ bụla naanị anyị nwere ike.
Bancaneo bụ naanị ndị ọzọ nwere ike ịbanye n'ụzọ iwu kwadoro ma mepụta nkwekọrịta na ịntanetị. Ọ bụrụ na ị rughị afọ 18, ịnwere ike iji Ọrụ ahụ naanị maka nkwenye nke nne ma ọ bụ nna gị ma ọ bụ onye nlekọta iwu. Biko hụ na nne ma ọ bụ nna gị ma ọ bụ onye nlekọta iwu enyochala ma soro gị kwurịtara Okwu ndị a.
Ejila ya mee ihe
Agree kwenyere iji saịtị na Ọrụ naanị maka ebumnuche nke Usoro Ojiji a nabatara yana nrube isi na iwu niile, ụkpụrụ, yana omume niile akwadoro ma ọ bụ ụkpụrụ nduzi na mpaghara ndị dị mkpa. Nwere ike iji saịtị na Ọrụ maka naanị azụmaahịa gị, ndị na-abụghị naanị ya, ndị na-enweghị ike inyefe ha, ndị na-anaghị enyefe ha, na ndị ọrụ ha nwere oke, na enweghị ebumnuche ndị ọzọ.
Will gaghị (na agaghị anwaa):
Nweta ọrụ ọ bụla n'ụzọ ọ bụla na-abụghị site na interface nke enyere site na Bancaneo;
Nweta ohere na-enwetaghị ikike Bancaneosistemụ kọmputa ma ọ bụ tinye aka na ọrụ ọ bụla na-egbochi arụmọrụ nke, ma ọ bụ na-emebi arụmọrụ ma ọ bụ nchekwa nke saịtị, Ọrụ, BancaneoNetwọk na sistemụ kọmputa;
Nweta saịtị ọ bụla ma ọ bụ Ọrụ ndị ahụ site na ụzọ ọ bụla akpaghị aka ma ọ bụ jiri akụrụngwa ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla (gụnyere iji edemede ma ọ bụ crawlers weebụ);
Nweta ma ọ bụ nakọta ozi ọ bụla nwere ike ịmata, gụnyere aha ọ bụla, adreesị ozi-e ma ọ bụ ozi ndị ọzọ dị otú ahụ maka nzube ọ bụla, gụnyere, n’enweghị njedebe, ebumnuche azụmahịa;
Mepụta, oyiri, detuo, ree, ahia, ma ọ bụ resell akụkụ ọ bụla nke saịtị ma ọ bụ Ọrụ maka nzube ọ bụla; na
Mepụta, oyiri, detuo, ree, ahia ma ọ bụ resell ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụ ọrụ nwere akara ụghalaahia ọ bụla, akara ọrụ, aha ahia, akara ma ọ bụ akara ọrụ nke Bancaneo n'ụzọ ọ ga-abụ ma ọ bụ zubere ịmegharị onye nwe ya ma ọ bụ onye ọrụ ikike nke akara, aha ma ọ bụ logos ndị ahụ.
Ikike Ndenye na Nweta Sitelọ; Iji anabata
Inwere ike ghara: (a) resell ma ọ bụ jiri azụmaahịa ọ bụla na saịtị a ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla dị na saịtị a; (b) gbanwee, imegharia, tugharia, nwegharia injinia, ghasaa, wepu ma obu gbanwee ihe obula n'ime saiti a ezughi ka agu ya; (c) detuo, imitateomie, enyo, mụta nwa, kesaa, bipụta, budata, gosi, igosi, zipu ma ọ bụ bufee nke ọ bụla n'ime saịtị a n'ụdị ọ bụla ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla; ma ọ bụ (d) jiri ntinye data ọ bụla, bots, spiders, ngwaọrụ akpaaka ma ọ bụ nchịkọta data yiri ya na ụzọ mmịpụta na ọdịnaya nke saịtị ma ọ bụ ịnakọta ozi ọ bụla site na saịtị ma ọ bụ onye ọrụ ọ bụla ọzọ nke saịtị.
Na-eji Saịtị a n’onwe gị n’ihe ize ndụ. I kwenyere na ị ga-ahụta n'onwe gị maka ojiji saịtị a yana nkwukọrịta okwu gị niile na saịtị a. Ọ bụrụ na anyị ekpebie, na uche anyị, na ị na-eme ihe ndị amachibidoro, enweghị nkwanye ùgwù maka ndị ọrụ ndị ọzọ, ma ọ bụ na-agabiga Usoro na Ọnọdụ, anyị nwere ike ịgọnahụ gị ịnweta saịtị a na nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide na mkpebi ọ bụla ịme otú ahụ ka ikpeazụ.
Akaụntụ, Ndebanye aha, na okwuntughe
Ọ bụrụ n ’iji Saịtị a yana ụdị ojiji achọrọ ịtọ akaụntụ na / ma ọ bụ okwuntughe (s), ị bụ naanị ọrụ maka ijigide nzuzo nke akaụntụ gị na paswọọdụ (s) yana igbochi ohere ịbanye na kọmputa gị. Ọ bụrụ na imeghe akaụntụ, denye aha, ma ọ bụ na-enyeghị anyị ozi ọ bụla, ị kwenyere ịnye anyị ozi dị ugbu a, zuru oke na nke ziri ezi dị ka ụdị ọ bụla chọrọ. Bancaneo abụghị maka njehie ọ bụla ma ọ bụ igbu oge na ịzaghachi ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ arịrịọ nke ozi oge ochie ma ọ bụ nke ezighi ezi nke ị nyere ma ọ bụ nsogbu ọ bụla na-enweghị ike ịchịkwa Bancaneo. Kwenyere ma kwenye na nbanye ọ bụla, njirimara, ma ọ bụ paswọọdụ enyere na njikọ na saịtị a (nke ọ bụla bụ "Paswọdu") bụ ozi nzuzo ma gha dokwa ya. Nwere ike ghara igosipụta dị otú ahụ a Paswọdu onye ọzọ ma ọ bụ kwadoro ma ọ bụ kwere ọzọ kwadoro ka ịnweta saịtị iji dị otú ahụ a Paswọdu. Ga-agwa Bancaneo ozugbo ịda iwu nchekwa ma ọ bụ iji ikike na akaụntụ gị n’enweghị ikike. Bancaneo enweghị ike ibu ọrụ ma wezuga ọrụ niile dị na njikọ, iji ozi ọ bụla biputere ma ọ bụ gosipụta na saịtị a.
Njirimara ikike nke ikike
Ojiji nke saịtị na ọdịnaya ya enyeghi gi ikike o bula banyere ikike nwebisiinka, atumatu, na ahia ahia na ihe omuma ndi ozo na ikike ikike ndi ekwuputara, gosiputara, ma obu metutara Ojuju (akowaputara n’okpuru) na saiti. Ọdịnaya niile, gụnyere ụghalaahịa nke atọ, atụmatụ, yana ikike arịa amamihe metụtara nke ekwuputara ma ọ bụ gosipụta na saịtị a, bụ ihe ọgụgụ isi mba na iwu ndị ọzọ na-echebe ya. A machibidoro ọ bụla na-enwetaghị ikike mmepụtaghachi, mmezigharị ma ọ bụ ojiji ndị ọzọ nke Ọdịnaya ahụ ma nwee ike ịkpata ntaramahụhụ obodo na mpụ. Nwere ike iji Ọdịnaya naanị site na iji ederede ma kwupụta izipu anyị. Iji jụọ maka ịnweta ikike iji ọdịnaya, biko kpọtụrụ anyị na [email protected]
Na mgbakwunye na ikike ikike ọgụgụ isi ekwuru n'elu, "Ọdịnaya" akọwapụtara dị ka ihe eserese ọ bụla, foto, gụnyere ikike onyonyo niile, ụda, egwu, vidiyo, ọdịyo, ma ọ bụ ederede na saịtị.
Bancaneo Enweghị ọrụ ọ bụla nyochaa saịtị a ma ọ bụ akụkụ ọ bụla. Agbanyeghị, anyị debere ikike inyocha ọdịnaya ọ bụla ezigara ma wepu, hichapụ, gbanwee ma ọ bụ na agbanyeghị ụdị ọdịnaya a, n'uche anyị, n'oge ọ bụla na site n'oge ruo n'oge, na-enweghị ọkwa ma ọ bụ ọrụ ọzọ enyere gị. Bancaneo enweghị ọrụ igosipụta ma ọ bụ tinye ọdịnaya ọ bụla. Bancaneo, dabere na Iwu Nzuzo nwere ikike igosipụta, n'oge ọ bụla na site n'oge ruo n'oge, ozi ọ bụla ma ọ bụ tinye ọdịnaya ọ chere na ọ dị mkpa ma ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị, gụnyere na-enweghị njedebe iji mejuo iwu ọ bụla, iwu, ụkpụrụ, ọrụ nkwekọrịta, iwu , usoro esemokwu, ma ọ bụ arịrịọ gọọmentị.
KWESESTRT IKE KWES PR P IWU N'okpuru Iwu Iwu, BANCANEO KWURU OKWU NA-AKA NA AT WARRR NA AT ALLRES, NA-EGO MA Ọ B (B A Ọ B WARR, (A) ANAKWETA ỌR OR MA ỌB ORR OR MA Ọ B FOR Ọ B FOR Ọ B FOR Ọ B P Ọ B OR Ọ B OR Ọ BIT NA NKỌ BANYERE, NA INTAN, MA Ọ B THE NT RKWU ND BY AH BY NA-EGO MA Ọ B OR EGO MA Ọ B OR N'ASLỌ AH,, (B) IWU MA Ọ B CON ỌRD NA-ECHICHE NA-ECHICHE, NA (C) ANAKWETA MA Ọ B CON NT OFKWU ND OR NA-EGO NA-EGO. A na-enye saịtị na ọdịnaya niile dị na ya na ihe jikọrọ ya na otu "D AS KA Ọ B” "N'AGBANYEGH AND YOURLỌ SLỌ N'ISLỌ AKA.
Kwenyere na ọ dịghị ihe ga-eme Bancaneo ga-akwụ gị ụgwọ, ma ọ bụ ndị ọzọ ọ bụla, maka uru ọ bụla furu efu, ihe ọghọm, nsonaazụ, ntaramahụhụ, pụrụ iche, ma ọ bụ mmebi ndị na-apụtaghị site na ma ọ bụ na njikọ na saịtị ma ọ bụ Usoro na Ọnọdụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na a dụrụ gị ọdụ ka o kwere omume nke mmebi, n'agbanyeghị agbanyeghị nkwupụta maka ụdị mmebi ahụ dabere na nkwekọrịta, mmekpa ahụ, ụgwọ siri ike ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ. Mmachi a na ikike gụnyere, mana ọnweghị oke, njehie ọ bụla (i), mmejọ, ma ọ bụ ezighi ezi na Ọdịnaya ọ bụla ma ọ bụ maka mfu ọ bụla ma ọ bụ mmebi nke ụdị ọ bụla nke mebere n'ihi ojiji nke ma ọ bụ ịdabere na Ọdịnaya ahụ; (ii) nnyefe nke chinchi ọ bụla, nje, Trojan ịnyịnya ma ọ bụ ihe ndị yiri nke ahụ nwere ike ibunye akụrụngwa gị, ọdịda nke igwe ma ọ bụ ngwa elektrọnik; (iii) nnweta ikike na ojiji nke saịtị ma ọ bụ Bancaneo'sava echekwara na / ma ọ bụ ozi nkeonwe ọ bụla na / ma ọ bụ ozi ego echekwara n'ime ya; ma ọ bụ (iv) izu ohi, njehie ndị ọrụ, ntiwapụ ma ọ bụ nsogbu ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ike ọ bụla.
I kwenyere na inemnify ma jide Bancaneo na ndị enyemaka ya, ndị mmekọ, ndị isi ya, ndị isi ya, ndị ọrụ ya na ndị ọrụ ya, na-adịghị njọ site na imegide uwe ọ bụla, ọrụ, nkwupụta, ọchịchọ, ntaramahụhụ ma ọ bụ mfu, gụnyere ụgwọ ndị ọka iwu nwere ezi uche, nke sitere na ma ọ bụ na-esite na ndị ọzọ. site na ojiji nke saịtị, mmebi nke Usoro na Ọnọdụ ma ọ bụ ihe ndị ọ na-etinye site na ntụaka, ma ọ bụ mmebi iwu ọ bụla, ụkpụrụ, iwu ma ọ bụ iwu iwu ndị ọzọ, ma ọ bụ ikike nke ndị ọzọ.
Usoro na Ọnọdụ ndị a ga-achịkwa ma kọwaa ya dị ka iwu Estonia si dị wee si na-edo onwe ya n'okpuru ikike naanị nke ụlọ ikpe Estonia.
Ọ bụrụ na ị na-eji ma ọ bụ soro na webụsaịtị ma ọ dị n'okpuru afọ 18, ị ga-enwerịrị ikike nke nne ma ọ bụ nna gị ma ọ bụ onye nlekọta iwu ịme ya. Site n'iji ma ọ bụ itinye aka na weebụsaịtị ahụ, ị ​​kwenyere ma kwenye na iwu iwu gị nyere gị ikike iji na / ma ọ bụ soro weebụsaịtị.
Nzuzo & Kuki
Maka ozi ndị ọzọ gbasara otu anyị si anakọta ozi na kuki gị, biko rụtụ aka na anyị amụma nzuzo na kuki amụma.
Anyị debere ikike iji melite ma degharịa usoro na ọnọdụ n'oge ọ bụla. Will ga - ama ma ọ bụrụ na edegharịrị Usoro na Ọnọdụ ndị a kemgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ ikpeazụ gị site na ị na - ezo aka na ụbọchị "fectbọchị Dị Irè nke Nzuzo Ugbu A" n'elu nke ibe a. Ojiji nke Saiti anyi bu nnabata gi n’agha ndi a dika anyi meghariri ma obu megharia ya site n’oge ruo n’oge, yabụ i kwesiri inyocha Usoro na Ọnọdụ a oge niile.
Mgbe ị gara na saịtị ma ọ bụ zitere anyị ozi-e, ị na-eji kọmputa ezitere anyị ozi. N'ime otu a, ị kwenyere ịnata nkwukọrịta site n'aka anyị na kọmputa. Kwenyere na nkwekọrịta niile, ọkwa, nkwupụta, na nkwukọrịta ndị ọzọ anyị na-enye gị na ntanetị na-emeju iwu ọ bụla iwu chọrọ na ederede dị otú a.
Ọ bụrụ na otu n'ime Usoro na Ọnọdụ ndị a ga-adị ka ihe na-abaghị uru, ihe na-abaghị uru, ma ọ bụ n'ihi ihe ọ bụla enweghị ike ịmanye ya, a ga-ewere okwu ahụ dị oke egwu ma ọ gaghị emetụta ndaba na ịmanye nke usoro ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla fọdụrụnụ.
A ga-ahapụ anyị ka anyị kenye, nyefee, ma ọ bụ mechie ikike na ọrụ anyị n'okpuru usoro ndị a na-enweghị nkwenye gị ma ọ bụ ọkwa ọ bụla nye gị. Agaghị enye gị ikike ikenye, nyefee, ma ọ bụ nyefee ọ bụla ikike na ọrụ dịịrị n'okpuru nkwekọrịta a.
Bancaneo anaghị akwụ ụgwọ maka igbu oge ọ bụla kpatara site na ọnọdụ gafere BancaneoNjikwa, dịka arụmụka izugbe izugbe, oke ihu igwe, agha, ọkụ, ọkụ ọgbụgba, mwakpo ndị na-eyi ọha egwu, gbanwere iwu gọọmentị, nsogbu ọrụaka, ntụpọ na ike- / tele- / kọntaktị kọmputa ma ọ bụ nkwukọrịta ndị ọzọ na nrụrụ ma ọ bụ igbu oge na ọrụ ahụ. site na ndị na-ebute ngwaahịa n'ihi ọnọdụ akọwapụtara n'elu.
Usoro na Ọnọdụ ndị a gosipụtara nghọta na nkwekọrịta dum n'etiti gị na Bancaneogbasara isiokwu dị n'ime ebe a ma dochie nkwukọrịta na amụma niile ma ọ bụ nke dị ugbu a, ma elektrọnik, ederede ma ọ bụ ederede banyere saịtị. A mbipụta nke Usoro na Ọnọdụ ndị a na ọkwa ọ bụla enyere na kọmputa ga-anabata ya na ikpe ma ọ bụ usoro nhazi dabere na ma ọ bụ metụtara Usoro ndị a na otu ọnọdụ yana n'okpuru otu ọnọdụ dị ka akwụkwọ azụmaahịa ndị ọzọ na ndekọ ndị emere na mbụ ma debe ya n'ụdị e biri ebi. Ikike nile enyeghị ọhere ozugbo ebe a ka edebere. Gaghị ekenye Usoro na Ọnọdụ, ma ọ bụ kenye, nyefee ma ọ bụ nyefee ikike gị n'ime ya. Emeghị ihe banyere nsogbu nke gị ma ọ bụ ndị ọzọ na-agbasaghị BancaneoIkike ime ihe gbasara mmebi iwu ndị ọzọ ma ọ bụ ndị yiri ya.
Okwu na Njedebe
Nkwekọrịta a ga-adị ire ụbọchị ị ga-ebu ụzọ nweta Saịtị ma nọgide na-arụ ọrụ ruo mgbe ịkwụsị ya dabara na usoro ya. Imebi nkwekọrịta a nwere ike ibute nkwụsị ozugbo na nkwekọrịta a na ịgọnahụ ma ọ bụ nkwụsị nke ịnweta saịtị gị. Mmachibido ndị dị otú ahụ nwere ike ịbụ nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide. Mgbe ịchisịrị, a ga-akagbu ikike gị iji saịtị a. Nkwuputa niile, njedebe nke ibu, ụgwọ, na ikike nke inwe na ikikere Bancaneo ga-alanarị nkwụsị ọ bụla.
Maka ajụjụ ọ bụla, mkpesa, na ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ kọọ mmebi ọ bụla, jiri obiọma zigara email [email protected]